Ikhaya AMERICAN STARS UJoel Campbell Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza indaba egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "Black Panther". Indaba yethu yeJoel Campbell Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, ukuthanda impilo, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi e-OFF-kancane ayengaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nokuhlakanipha kwakhe kwe-tactical intelligence kwi-World Cup ye-2014. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abalwazi okuningi ngoJoel Campbell's Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Joel Campbell Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isiqalo sokuphila
UJoel Nathaniel Campbell Samuels wazalwa ngo-26th ngoJune 1992, kunina, uRoxana Samuels nobaba, uHumberto Campbell eSan José, eCosta Rica.
Bobabili abazali njengoba bebalingiswa ngezansi babengumdlali webhola owaziwayo futhi bathandana ngenxa yomdlalo omuhle webhola owabahlanganisa.
Lapho u-Humberto Campbell noRoxana Samuels bezala ingxenye yesithathu yezingane zabo ezine (uJoel), izakhi zofuzo zebhola lezinyawo zashaya emagumbini eDoña Roxana, ngesizathu esilula. Indodana yabo ethandekayo, uJoel Campbell wazalwa njengesizukulwane sesihlanu sebhola emndenini kaRoxana Samuels omelela isizukulwane se-4th sokuzibophezela komndeni wakhe. U-Roxana Samuels (umama kaJoel Campbell) yisona sizathu esiyinhloko sokuthi ibhola liyi-DNA yendodana yakhe. Emuva ezinsukwini, wabizwa Pelela, ngokusobala, empeleni, eya eBrazil evelele U-Edson Arantes Do Nascimento, uPelé. Wathola amaphuzu amaningi afana nawo UPele ngesikhathi sakhe.
U-Roxana, wagcizelela ukuthi uJoel indodana yakhe wayefundele ibhola kusukela esibelethweni sakhe okwenziwe ngokweqile. Uphinde wathi lapho ezalwa, ngisho nalapho engakwazi ukukhuluma amazwi akhe okuqala, uJoel wayesevele ekwazi ukumomotheka nokubamba iqhaza eqenjini. Ikhono lakhe lokumomotheka njalo ubuhle obubili uJoel nabafowabo, uJunior Humberto, uKatherine noNekisha, bazuze njengefa likaDon Humberto, uyise wabo. Bobabili abazali bangamaKristu azinikele futhi bakhulisa izingane zabo ukuba zifanane nazo. UCampbell wakhula nabantakwethu abathathu (amagama ashiwo ngenhla).
Joel Campbell Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isifinyezo somsebenzi
Njengendodana yomndeni webhola, ibhola lalihlala liyingxenye ebalulekile yeDNA yakhe. Kwakuwumkhuhlane wokuthi kusukela ebusheni uJoel wayenabhola amabili. Kwakukhona ibhola lokuphumula elalisigcina kuphela uma kwenzeka elinye ligibela phansi noma lingene engadini yomakhelwane othile ongenakukhathazeka ongenqaba ukuyibuyisela ibhola kuye. Ngalesi sikhathi, uJoel Campbell wayeneminyaka emine ubudala.
Ibhola le-Campbell uGene libonakaliswe ekuqaleni ngesikhathi esemncane. U-Humberto, uyise wakhe wenza kubalulekile ukuba uCampbell esemncane afunde izindinganiso zebhola njengeziyalo nokuzinikezela. Ngaphandle kokuthonya kwabazali, ukuya esikoleni kwasiza uCampbell ukuba abe nesisekelo esihle emsebenzini wakhe. Emuva ngaleso sikhathi, wakhe Isikole samnikeza ithuba lokudlala ibhola lezemidlalo ngesikhathi sokudlala. Lokhu kwandisa ukuzimisela kwakhe ukuthatha 'Ibhola' ngokujulile njengoba kubonwe esithombeni somzuzwana ngezansi.
UJoel wayezimisele ngokuzimisela ukwenza amaphupho akhe agcwaliseke futhi izifiso zakhe kwakungeyona nje into edlula. UCampbell waqala eSaprissa, eqenjini lasekhaya laseCosta Rican okuthiwa "CArajillos waseValencia"ESan Rafael Abajo de Desamparados. Ngaleso sikhathi, abaqeqeshi abaye baba naye ngesikhathi sokusebenza kwakhe kwentsha, bamchaza ngokuthi umhlaseli okusheshayo onamandla okuthatha abaphikisi bakhe. Ubuye abe namakhono ahamba kahle kakhulu futhi aphelile kahle. UJoel Campbell uqedile ibhola lakhe lentsha njengomfana okhulile.
Ngemuva kokuqeda umsebenzi wakhe osemusha, uJoel wenzelwa ukubonakala okubili ngaphambi kokuthi abadlali be-Arsenal behamba bezungeza izwe. Kuthiwa wabulala bobabili uSevilla noFiorentina ukuthi basayine ne-Gunners.
Naphezu kokuthuthela kuma-Gunners avela kuSaprissa ku-2011, lo mdlali kumele alinde iminyaka emihlanu ngaphambi kokuba abe yingxenye yokuqala yokubonga ngokusebenza kwakhe kweNdebe yoMhlaba ye-2014. Uthole injabulo ukudlala uchungechunge lwamaclubs nakuba eshiya i-Arsenal futhi ngokuboleka imali. Ibhola yaba umuthi wegolide weCampbell, umdlalo lapho athola khona ukugcwaliseka. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Joel Campbell Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Ubudlelwano
Kusukela ebuntwaneni, uJoel uye waba udumo oluvamile lwe-Costarican ngenxa yeziboniso zakhe ezimangalisayo. Ikhono lakhe kanye namandla akhe, kanye nendlela yakhe yokuphila ngaphandle kwekhasi, yakha isithombe esiphelele ngaye. Iqiniso liwukuthi, uJoel Campbell uyakuthanda ubuhle futhi wathatha isikhathi sakhe ekutholeni okuhle kwenhliziyo yakhe.
UJoel wathola uthando kuMaria Fernanda Cascante owayengumfana wakhe. Ubuhlobo babo bukhula kusukela esimweni sesisu kuya othandweni lweqiniso.
Ngokushesha ngemva kokuhlangana noFernanda omuhle, akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba uJoel Campbell azame nabazali bakhe abanikeze izibusiso, ukusekelwa kanye nobuhlobo bobuhlobo.
UJoel Campbell wabhala uFernanda ngeminyaka ye-8 futhi uthando lwabo lwaluqondiswa ikhono labo lokuhlanganisana ngezikhathi zombili ezinzima nezinzima.
Ngemuva kokugubha umnyaka we-8th wobuhlobo bawo, ukuphakanyiswa komshado kwafika. Umshado wabo wabanjwa e-Iglesia de Pozos, e-Santa Ana e-Costa Rica ngoJuni 2017.
Umshado wawukhona nabalingani bakhe baseCosta Rican abathanda Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Futhi I-Keylor Navas. UJoel Campbell wajabulela impilo emisha ebusweni njengoba yabonakala lapho ekhumbula ukukhulelwa komkakho esithombeni ngezansi.
UFernanda wabeletha intombazane enhle encane okuthiwa uBrianna Campbell. Usalokhu ehlala ingane yakhe yokuqala nokuphela kwayo njengendlela yokubhala. UJoel njengoba kuchazwe ngezansi unamathele kakhulu kuBrianna Campbell, indodakazi yakhe ethandekayo.
UJoel Campbell unomzwelo futhi uzwela, futhi unakekelwa ngokujulile ezindabeni zomndeni nendlu yabo.
Bobabili uJoel Campbell, umkakhe nendodakazi ethandekayo bayathanda ukuya eholidini ezindaweni ezihlukahlukene zemvelo.
Ukuba nomfazi omuhle kanye nezingane ezithandekayo kwenza uCampbell ushintshe kangcono, ngaleyo ndlela asondelane kakhulu noNkulunkulu. UJoweli ubona umkakhe, umama nendodakazi njengensika yesibili empilweni yakhe, kanye noNkulunkulu wokuqala.
URoxana Samuels, unina kaJoel, wembula ukuthi ngaphambi komdlalo ngamunye, indodana yakhe ifunda iHubo 27. Okungcono, lo mkhuba waqala njengencomo evela kokubili umkakhe nomama. Yindlela uThankbell ekholelwa ngayo ngemidlalo yakhe.
IHubo 27 lithi; The Nkosi ukukhanya kwami ​​nensindiso yami; ngingamesaba bani na? iNkosi ingamandla okuphila kwami; Ngizokwesaba bani?
2 Lapho ababi, ngisho nezitha zami nezitha zami, beza kimi ukuba badle inyama yami, bakhubeka futhi bawa.
"Vakashela iBhayibheli Ukuze Uphumule!"
Joel Campbell Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Komndeni
Abazali Bakhe: "Umndeni kaHumberto ujabule", kusho uDoñana Roxana unina wendlu. Kuyinto efanelekile ukwazi ukuthi uHumberto owayengumdlali wezemidlalo manje ungumama-seaman ngenkathi umkakhe (umama kaJoel Campbell) engumdlali odlala umhlalaphansi.
Umndeni waseCampbell unombono wokuthi akudingeki ukuba nomona umuntu noma yini. "Zonke izimo ezifanayo, zilingana," uthi ubaba oboniswe ngezansi ubambelele ekubukeni imidlalo yebhola.
Okuningi mayelana nomama kaJoel Campbell: Umama kaJoel Campbell, owayengumdlali webhola lezemidlalo udlale umsebenzi wakhe e-Red Stars yase-Atlantic, kanti futhi uyisiqhema samantombazane umyeni wakhe aqondise ngaphambi kokuba bathole futhi bathandane. Bobabili uRoxana nendodana yakhe uCampbell basondelene kakhulu. Ubufakazi bwenziwa esitatimendeni sakhe ngezansi.
UDona Roxana wavuma ngalokhu: "Ngamncelisa uJoel njalo emilenzeni lapho eseyingane. Kuze kube yisikhathi, uJoel usenalolo mcamelo osondelene naye. Uyithatha noma ikuphi lapho ehamba khona, njengezinto ezithandekayo. Umcamelo ofanayo! "
Izakwethu: "Ungumdlali owaziwa kuphela ngempumelelo yakhe yezemidlalo kodwa ngokukwazi kwakhe ukuxhumana nokuhlala esondelene nabantwana bakhe," kusho uMichel, umzala wakhe. UJoel Campbell uyashesha ukusiza abanye, njengoba nje naye esheshayo ukugwema ukungqubuzana nezihlobo zakhe nabangane abamthandayo.
Joel Campbell Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Imininingwane yomuntu
UJoel Campbell uthanda amahhashi kodwa ukwesaba ukugibela eyodwa.
I-Campbell iphila impilo enhle kakhulu esingazi ngayo ngokusebenzisa i-Instagram yakhe esemthethweni. Unayo inkampani yakhe yekhonophone.
Ngaphandle kokugibela izimoto ezahlukene, uJoel Campbell ungumngane osondelene kakhulu nenja yakhe yesilwane.
Ngokuqondene naye Amandla, I-Campbell ikhona Ukuziqhenya, ukucabanga okukhulu, ukwethembeka, ngokomzwelo nokuzwelana kakhulu.
Ngokuqondene naye Ukuzilibazisa, UCampbell uyakuthanda Ubuciko, izinto zokuzilibazisa ekhaya, ukuphumula eduze noma emanzini, ukusiza abathandekayo (ikakhulukazi abazali kanye nabantakwethu), nokuzinikezela isikhathi sakhe sokuphumula nedeskithophu yakhe ekhaya. Imibiko yemidiya iphakamisa ukuthi ungumfundi ohlelweni lweYunivesithi.
Okushiwo nguJoel Campbell: Abafokazi, noma yikuphi ukugxeka kukaMama wakhe nokukhulula ulwazi mayelana nokuphila kwakhe siqu.
Joel Campbell Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ama-Wierd Facts
UCampbell ngokwakhe uyingxenye yomlingisi. Ngesinye isikhathi wathola amathikithi e-100 e-football stickers ukuze azithole. Ngeshwa, akazange.
Ugubha imigomo yakhe nge salute njengendlela yokubika kumzala wakhe. Lokhu ngezinye izikhathi kulandelwa umkhosi owedlula njengoba kuvezwe ngezansi.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu kaJoel Campbell Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.